COVID-19 ichabata 91 mamirioni evaoni veIsita marongero ekushandisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » COVID-19 ichabata 91 mamirioni evaoni veIsita marongero ekushandisa
Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu vanoronga kuve vane rupo nechavo kukurudzira
47% yevaAmerica vanoti chitendero chakavabatsira kupfuura nemudenda iri
MaAmerican vane 23% vane mukana wekupemberera Isita neshamwari uye mhuri zvichienzaniswa negore rapfuura
COVID-19 yakaita kuti vanhu vekuAmerica vatende zvikuru mhuri yavo
NaSvondo Svondo padhuze nekona, mhedzisiro yeEaster Survey yaburitswa nhasi. Ongororo iyi yakaona kuti COVID-19 inokanganisa hurongwa hwemashandisirwo emari vanoona nezveIsita gore rino, 91% pasi pehuwandu hwakakanganiswa gore rapfuura.
Kuti uzive kuti ndedzipi maguta anovimbisa nguva yakanyanya-kutsanangura zai musi waApril 4, nyanzvi dzeindasitiri dzakafananidza maguta zana akakurisa pamatanho gumi nematatu akakosha, kubva pamashopu ezvitoro uye chokoreti pamunhu kusvika paguta revaKristu.
Akanaka Maguta ePasika
4.New Orleans, LA
6. Kansas Guta, MO
10. Portland, KANA
Chokwadi cheIsita & Stats - Chechi, Candy & Cash
$ 21.6 Bhiriyoni: Mari yese ine chekuita neIsita inotarisirwa muna 2021 ($ 180 pamunhu achipemberera).
$ 3 Bhiriyoni: Yakafungidzirwa Isita kushandisa pasipi.
$ 49,000: Mutengo wechokoreti inodhura pasi rose Easter bunny.
Poshi%: Mugove wevanhu vanodya nzeve dzekokoreti nzeve kutanga.
Poshi%: Mugove wevabereki vanoronga kutumira mabhasikiti ePasika kuvana vavo mushure mekunge vabuda.
Coronavirus Pasaka Ongororo Mateki Akakosha
Vanhu vanoronga kuve vane rupo nechavo kukurudzira. Mamiriyoni makumi manomwe nematanhatu emamerica vanoti vaizopa chikamu chesangano rinotevera rinokurudzira.
Chitendero manyuko enyaradzo. 47% yevaAmerica vanoti chitendero chakavabatsira kupfuura nemudenda iri.
Denda rakatiita kuti tikoshese mhuri nehutano zvakanyanya. COVID-19 yaita kuti maAmerican vatende zvikuru mhuri yavo (39%), ichiteverwa nehutano (29%) uyezve nerusununguko (12%).
Vanhu vazhinji vanogona kupemberera mumunhu gore rino. MaAmerican vane 23% vane mukana wekupemberera Isita neshamwari uye mhuri zvichienzaniswa negore rapfuura.